Indawo Yokuhlala ePapershell - I-Airbnb
Indawo Yokuhlala ePapershell
Ifama sinombuki zindwendwe onguJessica
I-Papershell Lodge ikwindawo yethu eWillunga enembali. I-Lodge ijonge kumalwandle akumgangatho wehlabathi kunye nommandla wewayini we-McLaren Vale, zombini zikumgama wemizuzu eyi-5 kuphela xa uhamba ngemoto. I-Papershell yi-9 acre almond orchard etshintshela kwihlathi lokutya elahlukileyo kwaye siyakukhuthaza ukuba uzikhethele iziqhamo zakho kunye nemifuno uze uthi molo kwizilwanyana zethu. I-Lodge sisitudiyo esihle esineziko lenkomo, esakhelwe kwindlu yethu. Inesitudiyo esisezantsi, nendawo yokuhlala esezantsi.
Vuka uhlale emithini ukuze uvakale isandi seentaka uze wonwabele isidlo sakusasa kwibhalkoni ejonge phezu kophahla lwegadi ngqo ukuya ePt Willunga. Ngasekupheleni kukaJulayi / ekuqaleni kuka-Agasti i-almond orchard ineentyatyambo ezipheleleyo kwaye ibonakala inomtsalane!
Siyakuthanda ukuphatha iindwendwe zethu ngemveliso esandul 'ukuvunwa egadini, amaqanda amatsha, ii-alimondi zethu, i-muesli, izimuncumuncu ezibhakiweyo kunye nemigqomo/izinto zokukhetha - enoba leliphi ixesha lonyaka eliza nalo.
Isitudiyo kumgangatho osezantsi singasetyenziselwa ukwenza i-yoga yabucala. Siyakukhuthaza ukuba ucime, ususe uze ubuyisele imali eseleyo ebomini bakho.
Ebekwe ezantsi engceni ngumnyango wethu we-Almond (ifama yethu) ethengisa imveliso yethu (iziqhamo, imifuno, ii-alimondi, ubusi, iijams njl. kuxhomekeke kwixesha lonyaka). Ikwagcina umatshini wethu wokwenza ikofu, kwaye siyakuvuyela ukukwenzela ikofu ngexesha lokuhlala kwakho - sithumelele umyalezo!
Hamba-hamba endlini uze undwendwele igadi yethu yeziqhamo apho kuhlala khona amacephe ethu.
Yiya kwi-Greenhouse uze upholise impumlo yakho ukuze ubone apho sikhulisa khona imifuno yethu!
Bulisa iigusha zethu eziyi-6 uze uzive ukhululekile ukuzityisa ingca okanye i-spinach!
Hamba kwigadi yethu yasekhitshini uze ukhethe nantoni na oyithandayo.
Buka ubuhle bendalo uze udlule kwi-alimondi orchard, uze ubuke iindawo ezintle xa usiya kwiiWillunga Hills.
Ukususela ngoMatshi 2021 siza kuqalisa Inkqubo yethu Yobugcisa Nenkcubeko eza kusebenza eBarn yethu ngeeCawa. Ukuba ubhukishelwe ukuhlala ngeCawa kwaye unomdla wokuya kwi-workshop, nceda ujonge inkqubo yethu kwiwebhusayithi yethu.
4.96 · Izimvo eziyi-252
IWillunga yidolophu encinci, engummandla wewayini weMclaren Vale. Le dolophu ngokwayo igcwele ziimpawu kwaye ineevenkile ezininzi ezintle zobugcisa kunye neevenkile zempahla yombumbi, kunye neekhefi ezincinci kunye neevenkile zemveliso. Qho ngoMgqibelo kukho imarike entle yabalimi embindini wedolophu ukususela ngo-8-12.30 emva kwemini.
IWillunga ikumgama wemizuzu emihlanu kuphela xa uhamba ngemoto ukusuka kumalwandle anomtsalane, kwaye ingqongwe ziindawo zewayini ezikufutshane.
Ukuba unomdla wokunyuka intaba, kukho uhambo olumangalisayo kwiLoud 's Hill Road oluya ngqo kumantla eenduli zeWillunga, apho unokubona iindawo ezintle ukusuka elwandle ukuya kwiinduli.
Siyayilawula kwaye siqhuba ifama kwaye unokusibona ngale ndawo. Siyakuvuyela ukunceda nokuncokola kakhulu okanye kancinci kangangoko ufuna.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Willunga South